Wild Rift ကစားဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလား? ထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝ ရယူလိုက်ဖို့ ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို သိအောင်လုပ်လိုက်ပါ။ | Codashop Blog MM
Home Games League of Legends: Wild Rift Wild Rift ကစာ...
Wild Rift ကစားဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလား? ထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝ ရယူလိုက်ဖို့ ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို သိအောင်လုပ်လိုက်ပါ။
ဂုဏ်ယူပါတယ်! နောက်ဆုံးတော့ wild rift ရောက်လာပါပြီ။ league of legend universe ထဲကို ကိုယ့်ကိုကို ခေါ်ယူလိုက်ပါ။ MOBA နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိရင်တော့ wild rift ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာကို သင်ရင်းနှီးမှာပါ။ Leagueရဲ့ ဖုန်းဗားရှင်းမှာ စွန့်စားခန်းတွေ အပြည့်ပါတဲ့ မြေပုံငယ်လေးတွေ ပါပါတယ်၊ လောလောဆယ်ကစားလို့ရနိုင်တဲ့ champions 40 ကျော်နှင့်အတူလဲပါရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ရန်သူအသင်းရဲ့ Nexus ကိုဖြိုပြီး အနိုင်ယူလိုက်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမလုပ်ခင် သင့်ကိုယ်သင် အရင်ဆုံးဂိမ်းရဲ့ အချို့သောအခြေခံအပိုင်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိဖို့လိုလိမ့်ပါတယ်။ သင်ဖွင့်သည့်အခါကနေ Lobby, ပရိုဖိုင်, Events, Game modes, Loadouts တွေအပါအဝင် သင်တောက်လျှောက်ကစားစဉ် သင်ကြုံတွေ့ရမည့်အခြားရှုထောင့်များကို သိရှိအောင်လုပ်ပါ။ ဤအပိုင်းတွေကို လေ့လာခြင်းသည် Champion တွေကို ပိုအားကောင်းပြီး သင့်ဂိမ်းကစားနည်းကို တိုးတက်ပြီး ထိပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကို ကူညီလိမ့်မယ်။ ကဲစလိုက်ကြရအောင်!
Wild Rift lobby
ဒီအပိုင်းကတော့ ဂိမ်းရဲ့ အဓိက သုံးသပ်ချက်ပါ။ ဒီကနေ မတူတဲ့နေရာတွေကို ဝင်ရောက်နိုင်သလို (ဖုန်းမျက်နှာပြင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ) : ကစားသမားပုံ၊ blue motes၊ wild cores၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ setting၊ စာအဝင်နေရာ၊ လှုပ်ရှားမှု နှင့် သူငယ်ချင်းစာရင်း များကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်၏ အောက်ခြေရှိအောက်ပိုင်းကနေလည်း သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Store: Featured ( Bundles စသည်) ဝယ်ယူနိုင်သောနေရာ, champions, skins, items (baubles custom recalls နှင့် emotes) ပြီးတော့ Poro Store (ရရှိနိုင်သောပစ္စည်းများဝယ်နိုင်သလို Poro Energy Meter ကိုဖြည့်ဖို့ Poro Coinတွေသုံးပြီး random skin chest ကိုရယူပါ။ Blue motes၊ wild cores၊ poro coins တွေသုံးပြီး ပစ္စည်းတွေဝယ်နိုင်ပါတယ်။
Collection: ဒီကနေ Champions (Fighter, Tank, Mage, Assassin, Support, Marksman) တွေရွေးချယ်ပြီး ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ သင် Skin ၊ Personalization ကို ရယူနိုင်ပြီး customs recall, baubles, and rift emblems) ပြီးတော့ emotes တွေလဲ ဝယ်နိုင်ပါတယ်၊ ။
Loadouts: ဒီအပိုင်းကနေ Champion ရဲ့ Items, Runes, Spells တွေကို ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွင် ပေါင်းပြီး ကိုက်ညီအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာသင်ရဲ့ champion အတွက် ကြိုတင်အကြံပြု တည်ဆောက်ထားသော ရွေးချယ်မှုများကို Dropdown Menu တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ​သင့်စိတ်ဝင်စားမှု နဲ့ ကိုက်ညီရန် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ရွေးစရာတွေနဲ့ အတူပေါ့။ အကယ်၍ သင်ဟာ ကစားသမားအသစ်ဖြစ်ပြီး အထိရောက်ဆုံး တည်ဆောက်ပုံကိုရှာနေတုန်းဆိုရင် သင်အတွက်လွယ်ကူအောင် recommended ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်။
Leaderboard: ဒီနေရာက pack ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ ကစားသမားများကို ရှာတွေ့နိုင်တဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ Dropdown ကနေ စာရင်းကို ‘Friends’ (သင်၏ သူငယ်ချင်းများကြားတွင် သင်၏အဆင့် စစ်ဆေးရန်) မှ တဆင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ‘Server’ ကနေတော့ ယခုလက်ရှိမှာ ဘယ်ကစားသမားတွေက Rankရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေလည်းဆိုတာကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Leaderboard ထဲမှာ Ranked နဲ့ Classic ဆိုပြီး tab နှစ်ခုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက ကစားသမားတွေကို သူတို့ရဲ့ Season Rank အလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်တယ်။ Season တစ်ခုစတိုင်းမှာ အစကနေပြန်စတယ်။ အားလုံး Leaderboard တွင်ပါဝင်နိုင်ဖို့ တရားမျှတတဲ့ အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းပေါ့ ။ ဒုတိယတစ်ခုက ထိပ်တန်းကစားသမားများကို Champion Class တစ်ခုချင်းစီ အတွက်စာရင်းပြတယ်။ စာရင်းထဲတွင်ပါ၀င်သူများရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပင် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ တကယ်လို့ အဆင့်တစ် Garen ကစားသမားကဘယ် items, runes, spells ကိုသုံးလဲသိပြီး သူလိုလိုက်ဆော့ခြင်ရင် ဒီအပိုင်းကနေကူးယူလို့ရပါတယ် ။ ကစားသမားနာမည်ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းက open book iconကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
Vault: ဒီနေရာက Mission တွေပြီးပြီး ရတဲ့ဆုတွေနေရာတွေဘဲဖြစ်ပါတယ် ။ Random Skinကနေ Poro coin (poro storeမှာသုံးလို့ရသောအရာ) Champion Selection Chest နဲ့ တခြာအရာတွေကို ဒီကနေ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Missions – ဒီ tab က သင့်ကို ဆုလာဘ်များ ရရှိဖို့အတွက် ပြီးမြောက်ဖို့လိုပြီး ကွဲပြားသော တာဝန်များ (သို့) မစ်ရှင်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပါတယ်။ အဲ့မှာ ပုံမှန် Mission နဲ့ Challenge Mission (ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆုများနဲ့ မပွင့်သေးသော level 10) တွေ ရှိပါတယ်။ 120, 240, 400 လို့ နံပါတ်စဉ်တပ်ထားတဲ့ အရောင် ၃ ရောင်နဲ့ အတောင့်လေးတွေက Weekly Chestတွေပါ။ ရမှတ်တွေကို စုဆောင်းပြီး ဆုများရယူပါ (Blue Motes, Poro coins, XP) အဆင့်မြင့်မြင့်ရောက်လေလေ၊ ဆုကြီးကြီးရလေပါပဲ။
ဒါက player တွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို စာရင်းပြုထားတဲ့နေရာပါ။ သူတို့မှာ ပါ၀င်တာတွေကတော့
Overview– ဒီမှာ ကစားသမားရဲ့ နာမည် နဲ့ user ID​ နဲ့ အတူ သင့်ရဲ့လက်ရှိ level ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ profile icon ကို editလုပ်ပြီးတော့ (hero) နောက်ခံကို ရွေးဖို့ option tab တစ်ခုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Champion များ၊ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ skinများ၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ accountသက်တမ်း တို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင်အများဆုံးဆော့တဲ့championတွေကိုလည်း ဒီမှာပြပေးထားပါတယ်။
Match history- တိကျတဲ့ battle stat တွေနဲ့ သင့်ရဲ့ အရင်ပြိုင်ပွဲတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ Normal, Ranked, Custom Game စတာတွေရဲ့ ရလာဒ်တွေကို ပြဖို့ match history မှာ စစ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းကနေ teamနဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ ပရိုဖိုင် ကိုကြည့်နိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းအဖြစ် add နိုင်ပါတယ်။
Most played- သင်အများဆုံးကစားတဲ့ champion တွေကို Win Rate, Champion Score အတိအကျနဲ့အတူ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Stats- ဆော့ခဲ့တဲ့ Game အရေအတွက်၊ Win rate, ရခဲ့တဲ့ MVP, Kill stats (Penta, Triple, Legendary)နဲ့ First Blood အပါအ၀င် တိကျသော battle stats တွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ KDA, Teamfight Participation, damage dealt/taken နဲ့ တခြားအချက်တွေကို ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Achievements- ပြီးမြောက်နိုင်တဲ့ achievement စာရင်းတွေ (လောလောဆယ် 122ခုအထိ)။ စကားမစပ် ပြောရအုန်းမယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ achievement point တွေကိုရောက်ရင် Achievement rewardတွေကို ရနိုင်ပါတယ်နော်။ ဒီကနေ သင့်ရဲ့ achievement progress ကိုလည်း ကိုလဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Level 8 မှာ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပို Hype ဖြစ်စေဖို့အတွက် Main Lobbyရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ Event Section ရှိပါတယ်။ Player တွေက ဒီ special, time-limited events တွေမှာ ၀င်ရောက်ပါ၀င်နိုင်ပြီး ပြိုင်ပွဲပေါ်မူတည်ပြီး exclusive rewardsတွေရနိုင်တယ်။
ကဲ အကောင်းဆုံးကို နောက်ဆုံးအတွက် ချန်ထားရအောင်။ Main lobbyရဲ့ ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာ အပြာရောင် Play button အကြီးကြီးကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Game စတင်ဖို့ ဒါကိုနှိပ်ပါ။ ဒီကနေ game modes မျိုးစုံကို ၀င်ရောက်နိုင်ပါတယ် – Ranked (level 10 မှာ lock ပွင့်မယ်), Normal (PVP နဲ့ CO-OP vs. AI), Training (Tutorials တွေကနေသင်ယူပြီး Champions တွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ Additional Rewards တွေကိုရယူနိုင်တယ်), Custom (players9ယောက်အထိပါ၀င်နိုင်တဲ့ ပျော်စရာပြိုင်ပွဲတွေ)
ကဲ လောလောဆယ်တော့ ဒါတွေပါပဲ။ Riftမှာ အနိုင်ရဖို့အတွက် နောက်ထပ်‌စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Topicတွေကို ပြောပြဦးမှာမို့လို့ ကျွန်တော်တို့ blogကို ဆက်လက်နား‌စွင့်နေနော်။ သင့်ကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ့် League of Legends: Wild Rift – Beginner’s Guide to Victory ကိုလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
*In-game screenshot credits to Dennis Garcia and Arbon Bracamante / Codashop
Previous articleWavePay နဲ့ Codashop မှာဝယ်ပြီးတော့ ပြန်အမ်းငွေရယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်မည့်အချက်များ
Next articleCodashop Global Series January 2021 စည်းကမ်းများ